Manuel Akanji Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Tom Davies Childhood Akụkọ gbakwunyere Ihe Na-adịghị Eke Ahụ Eke Ndụ
Michael Obafemi Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Tomas Soucek Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Milan Skriniar Childhood Akụkọ gbakwunyere Ezigbo Ihe Ndị E Dere Ndụ
Akụkọ banyere Rome Burki Childhood Story Plus Ihe Ndị Na-adịghị Eke Ndụ
AllNdị egwuregwu bọọlụ GhanianNdị egwuregwu bọọlụ Ivory CoastNdị egwuregwu bọọlụ NigeriaNdị egwuregwu bọọlụ Senegalese
Jordan Ayew Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Duvan Zapata hoodmụaka Akụkọ Ihe Mere Eme Ihe Utold Biography Eziokwu
Giovani Lo Celso Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Papu Gomez Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agụba Akụkọ Ndụ
Home EUROPEAN FOOTBALL STORIES Ndị egwuregwu bọọlụ Switzerland Manuel Akanji Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Anyị Manuel Akanji Biography na-enye akụkọ zuru ezu banyere Akụkọ nwata, ndụ nwata, nne na nna, Eziokwu ezinụlọ, nwunye, ụmụaka, ndụ onwe onye na akụkọ ndụ. Ọ bụ nyocha nke akụkọ ndụ ya zuru oke, site na mgbe ọ bụ nwata rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Manuel Akanji's Biography. Lee, Ndụ Ndụ Ya Oge Ya. : ScoutNationHD na Instagram.
Eeh, mu na gi ma na Manuel Akanji bu Onye ọkpụkpọ nke agbụrụ onye Naijiria na ihe nlere nke onye na agbachitere ogbara ohuru. Agbanyeghị, ọ bụ naanị ndị egwuregwu bọọlụ ole na ole tụlere ịgụ Manuel Akanji's Biography nke anyị kwadobere, ọ dịkwa ụtọ. Ugbu a na-enweghị ọzọ ado, ka anyị malite.
Akụkọ Manuel Akanji:
Maka ndị mbido, aha ya zuru ezu bụ Manuel Obafemi Akanji. A mụrụ onye egwuregwu Switzerland bụ ụbọchị nke 19 nke July 1995 na nne ya, Isabel Akanji na nna, Abimbola Akanji na Neftenbach, obodo na Switzerland. Foto dị n'okpuru, nwa mara mma agbụrụ agbụrụ bịara n'ụwa dịka nwa nke abụọ na nwa nwoke mbụ nke ezinụlọ Akanji.
Nke mbu nke umu nwoke nke Manuel Akanji. A mụrụ obere Obafemi dịka nwa nwoke mbụ nke ezinụlọ ya. : Instagram.
Little Manuel tolitere n'akụkụ ụmụnne ya nwanyị abụọ ndị na-aza aha ha; Michelle na Sarah. Weremụnne nwoke niile mụrụ n’ime ezi ụlọ nke nwere egwuregwu na-asọfe n’uche ha niile. Mgbe ha di obere, Manuel, Sarah na Michelle bidoro ịgbaso usoro nke nne na nna ndi nzuzu ndi egwuregwu anyi n’iile anyi ga - ewebata na ngalaba ozo.
Manuel Akanji Eziokwu Mmalite:
Nke mbu, ndi egwuregwu Switzerland bu ndi nne Switzerland na nna ndi Nigeria. Agaghị enwe ike nne na nna Manuel Akanji izute ma ọ bụrụ na nna ya ahapụghị ọrụ ego ya na Lagos, Nigeria maka ịkwaga Switzerland.
Ndị nne na nna Manuel Akanji- Nna, Abimbola Akanji na nne, Isabel Akanji. : IG.
As BundesligaAkụkọ na-ekwupụta ya, Abimbola Akanji bụ ọkachamara na-ahụ maka ego nke Naijiria onye otu egwuregwu bọọlụ amateur na nwata. N'aka nke ọzọ, nne ya Isabel Akanji, bụ onye ọkpụkpọ tennis mbụ. N'ị mụta nke a, ị ga - ekwenye na m na Manuel nwere mgbọrọgwụ Switzerland-African zuru oke.
Manuel Akanji Ezinaụlọ:
Inwe nna nke bu ihe ego n’otu n’ime ulo oru ndi isi ego na Europe (Zurich) gha aghagha otutu ihe banyere ogugu ndi mmadu. Kedu maka nne nke kachasị dị ka onye na-egwu egwuregwu tenis? Site na echiche dị n'elu, ọ bụ ihe doro anya Manuel Akanji sitere na ezigbo ezinụlọ.
N'ikwu okwu site na foto nke oge ndụ ya, nwata ahụ dị ka ụdị nwatakịrị nke nne na nna ya nwere ike inye ya nchịkọta egwuregwu ụmụaka kachasị ọhụrụ. Dịka nwata, obere Manuel nwere mmasị n'ịnyịnya igwe. Ka anyị ghara ichefu, ọ bụ onye kwụrụ ọtọ nke Manchester United fan.
Ihe ịrịba ama nke oge ntorobịa. Ndị nne na nna Manuel Akanji bụ ụdị ndị nwere ike inye ya nchịkọta egwuregwu ụmụaka kachasị ọhụrụ. : Picuki.
Manuel Akanji Childhood Akụkọ - Mmụta:
Dịka nwata Switzerland, ọ malitere ,lọ akwụkwọ ọta akara mgbe ọ dị afọ 4 na ụlọ akwụkwọ praịmarị mgbe ọ dị afọ 6. Site na mmalite, ndị nne na nna Manuel Akanji lere agụmakwụkwọ anya dị ka ihe dị oke mkpa. Mgbe ọ ka nọ n'ụlọ akwụkwọ, nwa nke a nwetara aha ọma site na ọnụọgụgụ na akara ọgụgụ isi ya. N’ikwu banyere ahụmịhe ya n’ụlọ akwụkwọ, Akanji kwuru otu oge.
Ọ tọrọ m ụtọ. Laa azụ n'oge ahụ, ọ bụrụ na enwere akara nke nwere ọnụọgụ ise dị iche iche, aga m esi na ya rụọ ụdị ọrụ nile. Enwere m ike iburu nọmba ogologo.
Site na nke anọ ruo na nke isii, enwekwara m onye nkụzi nke na-ahazi asọmpi oge niile na usoro ọmụmụ ọgụgụ isi. Asọmpi a kpaliri m dịka m meriri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge ọ bụla.
Manuel Akanji Biography- Ọrụ Buildup:
Dịka nwata, Obafemi gbara bọọlụ nke ukwuu n’oge ezumike klaasị ya na ndị enyi ya gụchara ụlọ akwụkwọ. Site na nmalite, ụdị ndị o gosipụtara n'egwuregwu abụwo nna nna onye Nigeria, Abimbola.
Na mbido, nna ukwu nke nweburu ọrụ dara ada chọrọ ka nwa ya nwoke mezie mmejọ ya wee bie ndụ ezinụlọ Akanji. N'ikwu okwu banyere otú nna ya si mee ka ọ banye n'ime egwuregwu ahụ, Manuel kwuru otu oge;
Anọ m na-ekiri nna m na-agba bọl ruo mgbe m chọrọ ịnwale ya n'onwe m.
Emekwara m ịkụ tenis. Ma mgbe ọzụzụ banyere bọọlụ bịara sie ike karị, akwụsịrị m ịkụ tennis na ụlọ akwụkwọ.
Manuel Akanji Biography- Ndụ nlekọta mbụ:
Mgbe ọ dị afọ 9, Manuel Akanji na-eto eto etinyere aha ya na FC Wiesendangen, otu egwuregwu egwuregwu Amateur na agbata obi ya. Ikekwe ị maghị ma, nwata ahụ bidoro njem ọrụ ya dịka onye na-agba etiti na onye ọkpọ. N'oge ahụ, onye ọ bụla maara ya dị ka nwata nwere isi, onye malitere ịnakọta nsọpụrụ na nwata.
Nwa ahụ dị nkọ! Nwa nwoke Manuel Akanji bidoro ịnakọta ihe nrite nke football n'oge ọ dị obere. : IG.
N'inwe mmuta ohuru na ulo akwukwo nke mbu dọtara FC Winterthur, mgbe o ruru afọ 11. Nke a bu ulo akwukwo buru ibu nke mere na ngalaba nke abuo nke Switzerland. N'ebe ahụ, Manuel Akanji gara n'ihu na-arịgo n'usoro ndị ntorobịa, njirimara nke dugara na ịga ụlọ akwụkwọ ọta akara ịga nke ọma. Echefula, nwatakịrị ahụ ghọrọ onye na - agbachitere etiti mgbe ọ dị afọ 17.
Manuel Akanji Biography- tozọ Ziri Ezi Akụkọ:
Mgbe m gụsịrị akwụkwọ agụmakwụkwọ, onye egwuregwu Switzerland, n'ihi ọrụ siri ike, ghọrọ akụkụ nke ndị otu egwuregwu mbụ nke Winterthur. Nke kachasị, ọ joyụ nke ezinụlọ Manuel Akanji amaghị oke n'oge ọ nwere ọkpụkpọ oku mba ọ ga-eso na ndị otu egwuregwu U-20 Switzerland. Site n'oge ahụ, ọ maara na ya ga - ejide mmụọ ịkwụ ụgwọ.
Followinggbaso ọganihu siri ike na ndị otu mba, FC Basel, bụ nnukwu klọb na Switzerland, chọpụtara ma nweta Akanji na afọ 2015. Mgbe ha nọ na klọb ahụ, Super Central Back nyeere ha aka inweta asọmpị Switzerland na Super League ugboro abụọ. Inweta ihe ngosi a mere ka ndi ozo si na Europe Big Clubs choo maka oru ya.
Ihe ịga nke ọma Manuel Akanji FC Basel bụ oge mgbanwe nke ọrụ ya. : Pinterest.
Manuel Akanji Biography- Bilie na Akụkọ Ama:
Followinggbaso ọpụpụ nke Sokratis Papastathopoulos nye Arsenal, Borussia Dortmund bidoro chọwa onye ga-emeju akpụkpọ ụkwụ Greek. Na ihu ọma, Manuel Akanji ghọrọ nhọrọ ikpeazụ nke BVB. Ezigbo ọrụ Dortmund malitere mere ka a kpọọ oku World Cup 2018, ebe ya na ya so Haris Seferović, Granit Xhaka, na Xherdan Shaqiri wdg nyeere Switzerland aka iru ọkwa nke ịkụ aka.
N'oge edere Manuel Akanji's Biography, onye agbachitere Central Defender ugbu a dịka ọkaibe na otu Ngwa ngwa ngwa Bundesliga. Kemgbe o sonyere klọb ndị German, ọganiihu ya etolitela site na mmali na oke. N’oge na-adịghị anya otu afọ isonyere BVB, Obafemi nyeere aka aka ya merie 2019 DFL-Supercup.
Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ maara na Ọ B easy adịghị mfe ịhụ nnukwu ndị na - agbachitere Central ngwa ngwa - na-ekwu maka ihe masịrị ya Raphael Varane. Agbanyeghị, anyị nwere obi ụtọ ịhụ igwe kpakpando ọhụrụ nke CB na nke Manuel Akanji. Naanị oge tupu ndị egwuregwu Switzerland amalite ụzọ ya iji bụrụ onye nwere onyinye ụwa. Ndị ọzọ, dị ka anyị kwuru (gụnyere isi ya nke dị n'okpuru), bụ akụkọ ugbu a.
Manuel Akanji Love Story:
N'ịga njem siri ike wee bụrụ ọkachamara na ịgba bọọlụ, onye otu egwuregwu Switzerland si oge ụfọdụ nwere mkpa ọ dị inwe onye ga-abụ Half ya Better. Ọ chọrọ enyi nwanyị ga-ahụ maka nkwụsi ike nke mmetụta uche ya, ọganihu ya na mmepe ya ogologo oge dịka onye egwuregwu ụkwụ.
Manual Akanji nwetara Gbanyụọ na mbụ, nke Melanie:
Zute Melanie, ọ bụ nwanyị enyi nwanyị mbụ na nke mmụọ ozi na nwunye nwanyị nke Manuel Akanji ugbu a. 📷: Facebook
Ihe dị ka afọ ise gara aga kemgbe a na-edobe Biography nke Manuel Akanji, onye na-agba bọọlụ zutere Pretty Damsel onye na-akpọ Melanie Windler. Nzukọ ha mere ka ọbụbụenyi ya na onye Akansi nwere nnukwu agụụ, nwee nnukwu mmụọ ịrịọ ya ụbọchị. N'ụzọ dị nwute, ọ gabigara ihe niile ahụ ọsọ wee gbatuo.
Uzo esi Akanji meriri Obi Melanie:
Ọ dị mma ịmara na Nwa hụrụ n'anya adaghị mbà. Threebọchị atọ mgbe nzukọ mbụ ha gasịrị, Melanie Windler gara US maka ọkara agụmakwụkwọ maka ụmụ akwụkwọ, ruo ọnwa anọ. Manuel Akanji gara n'ihu na-achụ ya anya.
“Anọ m na-eche ya,” ka onye ụkwụ ukwu ahụ kọwara, na-achị ọchị. Inwe ndidi mere ka m nweta obi ya. ”
Melanie Windler ghọrọ Nwanyị nwanyị Manuel Akanji gburugburu Septemba 2015. Oge a kwekọrọ na ya mgbe ọ sonyere FC Basel. Ọ bụ oge ọ na-enwetaghị ama.
Manuel Akanji, dị ka ọtụtụ ndị mmadụ, mere ndidi iji merie obi onye ọ hụrụ n'anya. Ọ bụ Melanie, nwunye ya n'ọdịnihu. : IG
Na ngwụsị afọ ikpeazụ nke 2018, kpọmkwem 28th nke Septemba, ndị egwuregwu Switzerland bịara nwee obi ike iji bulie ajụjụ kachasị. Obafemi tụụrụ Melanie, Nwanyị ya ugwu. O mere ka ọha na eze site na Instagram ya na ntinye akwụkwọ;
Ọ bụ ya bụ ya
Manuel Akanji na Melanie Windler mere ememe agbamakwụkwọ ha na 23 nke June 2019 na Mallorca, agwaetiti kachasị ibu na Spain. Ọ bụ ememe nke nwere ndị otu egwuregwu, ezigbo ndị enyi na ndị ezinaụlọ dịka ndị ọbịa a kpọrọ.
Alụmdi na nwunye Manuel Akanji- The Swiss Nigerian lụrụ ọmarịcha enyi nwanyị ya, Melanie na June, 2019. 📷: Instagram
Kemgbe ijikọ aka, a hụrụ Manuel Akanji na nwunye ya Melanie ka ha na-enwe oge niile na-ekpori ndụ n'ebe ndị njem mmiri ndị Europe na-ewu ewu. Site na foto dị n'okpuru, ị ga-achọpụta na ha abụọ ga-abụ nne na nna.
Ndị hụrụ ha n'anya na-ahọrọ iji oge dị jụụ na njem ndị dị n'akụkụ oke osimiri. : Picuki
N'oge a itinye Bio a, ndị otu egwuregwu Switzerland na nwunye ya bụ nne na nna nwa ha mụrụ aha ha. Aayden Malik Adebayo Akanji. Aha etiti nwa ya na-ewelite ajụjụ ma ọ bụ onye Alakụba. Echefula, a mụrụ Aayden Akanji obere oge oria ojoo Conoravirus.
Maka onye na-agba bọọlụ, ego dị nnukwu mkpa ma kwụrụ ọtọ maka ihe kpatara o ji arụsi ọrụ ike. Na ngalaba a, anyị ga-agwa gị etu Manuel Akanji si eji ụgwọ ọrụ ya bụ € 48,000 kwa izu yana ụgwọ nde euro 2.5 kwa afọ.
Manuel Akanji Cars:
Maka ndị na-amaghị, ndị na-agba ụkwụ nwere mmasị na iyi uwe dabara adaba, ọkachasị nke dabara na agba ya Range Rover. Dịka a hụrụ n’okpuru, otu n’ime agba Manuel na-acha ọcha, ma ọ nwere mmasị na iji polo ọcha, nke dabara na agba ụgbọ ya.
Cargbọala Manuel Akanji, ndị Range Rover na-enyocha. Onye na-egwu egwuregwu maara etu esi emefu onwe ya. : Picuki.
Ọ bụrụ na onye egwuregwu Switzerland esighị uwe na-acha ọcha na akwa akwa, ọ nwere ike ị ga-ahụ ya na agba nke abụọ kachasị amasị ya, nke bụ 'Black.' Ugbu a ajụjụ! - Manuel Akanji ọ dị mma ile anya na akwa ya nwere akwa ojii karịa ọcha dị n’elu?
Manuel Akanji nwere mmasị na akwa akwa ojii ka o kwekọ n'ụgbọ ya. Dị ka ọ na - eme na uwe ọcha ya na uwe elu ya. : IG
Ike igwe eji agha:
Onweghi ihe na - eme ka ndị ụkwụ bọọlụ yie ihe dị jụụ karịa ịhụ ha n’elu igwe elekere anọ nwere ụkwụ. Anyi nke Manuel Akanji bu onye n’ego ya. Inghụ nchịkọta ụgbọala ya niile, ị ga - ekwenye anyị na ọ bụ, ibe anyị na - amakarị, ma na egwu ma ama.
Checkout Manuel Akanji nwere ụkwụ anọ nwere ụkwụ. Onye na-agba ụkwụ na-ahụ maka igosi akụ ya. : Insta
Ndụ Manuel Akanji:
Mmetụta ịhụnanya nke otu ezinụlọ agbụrụ na-emekọ ihe ọnụ na-eweta obi ụtọ niile, nke bụ nke otu ụdị, na-agaghị enwe ike dochie ya. Kpoo ezinuo ndi Switzerland ama nke ama ama na Switzerland ka ha na-ese foto n’ulo ezin’ulo ha nke di na Wiesendangen, Switzerland.
Zute Ezinụlọ Manuel Akanji. Site n'aka ekpe gaa n'aka nri anyị nwere Sara (nwanne nwanyị nke okenye), Manuel Obafemi, Abimbola (onye isi ụlọ), Isabel (nne nke ụlọ) na Michelle (nwa ikpeazụ mụrụ). : Pinterest
Na ngalaba a, anyị ga-agwa gị ihe ndị ọzọ gbasara nne na nna Manuel Akanji na-amalite site na nna ya nke ndị Nigeria.
Banyere Nna Nna Akanji Manual:
Nke mbu, nna ukwu a na -akpọ 'Abimbola' nwere aha 'Abi'. Nna onye Naijiria bụ ọkachamara na-ahụ maka ego ma mụọ akụ na ụba ma na-arụ ọrụ na ABB, ụlọ ọrụ Switzerland nke ike na akpaaka akpaaka.
Site n'afọ 2007 rue 2010, Abimbola Akanji nwere ohere ịrụ ọrụ n'obodo ya (Nigeria). N’oge ahụ, ọ kpọgara ụlọ ya na Naịjirịa wee mee ka ha mata ndị ezi-na-ụlọ ya.
Hụ ka ụmụ ya na-eme nke ọma n'egwuregwu emeela ka Abimbola nwee ụta ọ bụla nke ịkwụsị ọrụ football ya n'oge ọ dị obere. Ih! onye nna ato mụrụ bọl bọl na mgbe e mechara, Tenis ma hapụzie egwuregwu niile. Abimbola bụ ụdị nke hụrụ n'anya iwepụta oge iji soro ụmụ ya na-anọrị.
Ntuziaka Akanji hụrụ n'anya ka ya na ụmụ ya na-anọrị. : Instagram
Banyere nne Manual Akanji:
Isabel Akanji bụ nnukwu nne nke ezinụlọ ezinụlọ Switzerland na-ama ama. Nne nke umu ato bu onye egwuregwu ime onwe- (onye chiburu egwuregwu tennis) nke mechara gbaa Volleyball. O zutere di ya Abimbola Akanji na United States mgbe ọ nọ na mba ọzọ.
Banyere Nwanne Akanji Akanji:
Onye egwuregwu Switzerland a nwere nwanne abụọ, Sarah na Michelle- ụmụ nwanyị niile. O nweghi nwanne. Nwanne nwanyị nke okenye Manuel- Sarah mụrụ n'afọ 1993, nke na-eme ka ọ nọrọ afọ abụọ ya. N’aka nke ọzọ, Michelle dị afọ isii karịa nwanne ya nwoke. N'okpuru ebe a bụ foto mara mma nke ụmụnne nwanyị Manuel Akanji.
Nwanne Nwanyị Manuel Akanji- Sarah (n'aka ekpe) na Michelle (n'aka nri). : LandBote
Sibmụnwaanyị Akanji abanyela n'egwuregwu. Nwata, Michelle bu onye agba oso. Nke okenye, Sarah Akanji (dị ka nwanne ya nwoke, Manuel) bụ onye na-agba bọl ma bụrụkwa onye na-agbachitere. N'otu oge ọ na-egwuri egwu maka FC Winterthur na FC St. Gallen, na asọmpi ụmụ nwanyị Switzerland kacha elu. Ma Sera na Manuel dị ka ezigbo ndị enyi, ekele niile maka football.
Sarah na Manuel bụ ndị ọkachamara n'egwuregwu Akanji.📷: Blick
Ulo ndi Manuel Akanji makwaara na Switzerland Politics:
You maara?… Sarah Akanji abụghị naanị onye ịgba bọọlụ kamakwa onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo Switzerland. Ọ gbara ọsọ na ntuli aka ndị kansul Switzerland n'otu oge. Dịka anyị debere Manuel Akanji's Biography, nwanne ya nwanyị bụ Sarah ka edobere dịka onye otu Cantonal Council nke Zurich.
Obi abụọ adịghị ya, nne na nna Manuel Akanji amụghị naanị ndị egwuregwu abụọ na onye na-eme egwuregwu, kamakwa onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na onye bụ Sarah.
Manuel Akanji Ndụ Ndụ:
Nke mbu, onye egwuregwu Switzerland bu onye n’agba umuaka na onye n’emeghi ka obi ike ya di elu na mpako. Fansfọdụ ndị na-eme egwuregwu ga-ekwu na ụzọ ya adịghị agbanwe agbanwe, mana o nweghị ihe ọ bụla gbasara ya nke adịgboroja, nwee ntụkwasị obi karịa ma nwee nganga.
Ọzọkwa, Switzerland Center-Back nwere nkà nkwurịta okwu dị ịrịba ama. Manuel maara asụsụ Bekee, French na German nke ọma, ọ bụ naanị Spanish ka furu efu. N’ikpeazụ, ọ bụ onye mmiri gbara gburugburu na-enwe mmasị na kaadị ịgba egwu, hụ basketball n'anya ma na-akwado ndị otu egwuregwu nke Nigeria.
Tomata Manuel Akanji Ndụ Ndụ nke mmadụ ga - enyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma. : Instagram.
Manuel Akanji Untold Eziokwu:
Eziokwu # 1- Mmebi ego BVB na mpako ya na Nkezi German:
Tebụl a na-enye nghọta miri emi banyere ihe Manuel Akanji (n'oge edere) na-enweta na oge na ego.
Enweta ego na Swiss franc (CHF)
Inwe ego na Euro (€)
Inwe ego na dollar ($)
Kwa Afọ CHF 2,654,288.53 € 2,503,845 £ 2,245,321 $ 2,764,462
kwa ọnwa CHF 221,191 € 208,654 £ 187,110 $ 230,372
Kwa Izu CHF 50,966 € 48,076.9 £ 43,113 $ 53,082
Kwa .bọchị CHF 7,281 € 6,869 £ 6,159 $ 7,583
Kwa elekere CHF 303.4 € 286 £ 256.7 $ 316
Kwa Nkeji CHF 5 € 4.8 £ 4.3 $ 5.3
Sekọnd CHF 0.08 € 0.08 £ 0.07 $ 0.09
Nke a bụ ihe Manuel Akanji eritela uru kemgbe ị malitere ile Peeji a.
Otu nwa amaala German nke na-akpata 3,770 euro kwa ọnwa kwesịrị ịrụ ọrụ ma ọ dịkarịa ala afọ isii na ọnwa itoolu iji nweta ụgwọ ọnwa kwa ọnwa. Ebe, nkezi nwa amaala Switzerland kwesịrị ịrụ ọrụ ruo afọ atọ.
Eziokwu # 2- Ihe aha etiti ya 'Obefemi' gbasara Ọkpụkpụ ntutu ya:
Okpueze nke na-eso ntutu isi ya nwere ihe metụtara ya nketa nke ala Nigeria.
Aking nweta nke ọma, ị ga-ahụ okpueze a kpụrụ akpụ dị ka akụkụ nke ụdị ntutu ya. Ọ pụtaghị ngosipụta mana kama ọ bụ ngosipụta nke aha ala Nigeria ya 'Obafemi'.
Ndị nne na nna Manuel Akanji mere ka ọ bụrụ aha ndị Yoruba nke Nigeria 'Obafemi' nke pụtara 'Eze hụrụ ya n'anya'. Na nchikota, ahia ahia ya kpuchiri okpueze nwere ihe jikoro ya na ihe nketa ndi ala Nigeria.
Eziokwu # 3- Nkọwa nke Tattoos Manuel Akanji:
Ihe kachasị pụta ìhè banyere igbu egbugbu ya bụ nke na-ekwu; 'Gosipụta na ha adịghị mma'. Manuel Akanji nwere egbugbu a n'oge o jiri ọnwa iri na otu na-anọghị na football n'ihi Torn Cruciate Ligament. Ebumnuche a bụ igbu egbugbu ndị na-akatọ ya, karịsịa ndị chere na ọrụ ya agwụla na ndị na-eche na ọ gaghị eme ya ruo mgbe mmerụ ahụ ahụ gasịrị.
Isi nke Manuel Akanji's Tattoos
Akara nke abụọ kacha mara amara bụ n’elu obi ya nke emere maka ezinụlọ ya. Ọ na-agụ 'Ezinaụlọ bụ ebe Ndụ bidoro na neverhụnanya anaghị akwụsị. "
Eziokwu # 4- Ihe FIFA FIFA Stats Kwuru:
N'iwu site n'ihe osise dị n'okpuru, ị ga - ekwenye na m na Akanji nwere ihe niile CB chọrọ. Stats nke Switzerland FIFA dị ka nke José Gimenez.
Ihe egwuregwu FIFAfe nke Obafemi gosipụtara na ya erughi ogo ya
Eziokwu # 5- Kedu ihe gaara eme ma ọ bụrụ na Football agaghị arụpụta ihe:
Mgbe ọ nọ na agụmakwụkwọ nwata, onye na - agbachitere onye Switzerland mere ọmụmụ nwa oge. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na Switzerland (afọ 15), ndị mụrụ Manuel Akanji kwusiri ya ike na ọ na-ekere òkè na nkuzi ọzụzụ iji ghọọ onye ahịa. Ihe kpatara ya bụ na ọ nwere ike inwe ihe ma ọ bụrụ na football anaghị arụ ọrụ. Manuel enweghị isi gbara bọọlụ gbara.
Aha n'uju: Manuel Obafemi Akanji.
aha otutu: Stabilisator
A mụrụ: 19 Julaị 1995 na Neftenbach, Switzerland.
Ndị nne na nna: Isabel Akanji (Nne) na Abimbola Akanji (Nna)
Ụmụnne: Sarah Akanji (nwanne nwanyị nke okenye) na Michelle Akanji (nwanne nwanyị nke obere)
Nwunye: Melanie Akanji. Nwa agbọghọ bụbu nwanyị a maara dị ka Melanie Windler.
Ihe Banyere Ezinaụlọ: Switzerland-Nigerian Ancestry
Net uru: Ihe dị ka Nde $ 5 (Nde 2020)
elu: 1.86 mita MA 6 Ifet 1 sentimita.
Ihe omume: Bọọlụ Nkata, Tenis tebụl na ikiri TV.
Zodiac: Ọrịa cancer.
Rozọ Mbido nke mbụ: Raul (Akụkọ Mgbe ochie Real Madrid).
Onye Nlereanya ugbu a: Sergio Ramos
Agba Mma: Black na White
Obi abụọ adịghị ya, Manuel Akanji bụ nnukwu onyinye ma nwee akara ngosipụta nke nnukwu onye na-agbachitere etiti. Biko gwa anyị na ngalaba ikwu, ihe ị chere maka edetu anyị na ndị egwuregwu. Daalụ maka ịgụ akụkọ ndụ nke onye na-agbachitere ihe ama ama.
Haris Seferovic Childhood Story Plus Ihe Ntinye Ucheld Biography
Granit Xhaka Child Story Plus Na-agbaghasị akụkọ ndụ
Xherdan Shaqiri Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Bọchị edoziri: July 19, 2020
Bọchị edoziri: July 18, 2020
Bọchị edoziri: July 8, 2020
Bọchị agbanweela: June 27, 2020
Bọchị agbanweela: June 20, 2020